ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa, 2020 -
Adda Bilisummaa Oromoo Irraa, Amajjii 1, 2020
Kabajamaa Ummata bal’aa Oromoo fi Kabajamtoota miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenya ABO, akkasumas, qabsaawota Oromoo hundaan baga bara haaraya 2020 nagayaan simattan oggaa jennu gammachuu guddaadhaani.
Amajjiin 01 seensa bara haarayaa tahuutti dabalee seenaa Qabsoo Bilisummaa Saba Oromoo kan ABO.dhaan hoogganamu keessatti iddoo ol’aanaa kan qabuu fi akka Guyyaa Qabsaawotaatti kan beekamuu dha. Kana irraa ka’uudhaanis waggoota dheeraaf qabsaawota miseensotaa fi deggertoota ABO biratti biyya alaa fi biyya keessatti iddoo gara garaatti haalota hunda keessatti bifa danda’ameen kabajamaa fi yaadatamaa yoona gahe. Guyyaa kana kan yaadannuu fi kabajnu waan keessa dabarre wal qaabachiisuu fi isa irra dhaabbannee ammoo waan fuula keenya dura jirutti akkamiin akka qophaawuu qabnu waliif akeekuudhaani.
Barri keessa dabarre (2019) Ummatni keenya miira wal makaa taheen guutamee kan dabarse tahuun waan hundi keenya beeknu dha. Jijjiirama siyaasaa qabsoo Ummata keenyaatiin eegalame fiixa baasuuf abdiin jiruu fi hojiin hojjetaa turree fi itti jirru guddaa tahus abdii kana masheensuu fi hojii keenya gufachiisuuf danqaaleen nu dura naqamanis hangasuma guddaa fi wal xaxaa turan. Har’as akkasuma. Kana gidduutti wareegama ulfaataa fi suukanneessaa Ummatni keenya waggaa dabarsine kana (2019) keessatti qofa baase (keessattuu maqaa ‘Command Post’ jedhuun daba guddaa fi roorroo Godinoota Oromiyaa hedduu keessatti Ummata keenya irra gahaa jiru) oggaa yaadannu hedduu nu dhukkubsa. Gama kaaniin ammoo barri 2019 Dhaabni keenya ABOn waggoota 27 booda biyya kana keessatti beekkamtii seera-qabeessummaa kan itti argate tahuun Dhaaba keenyaa fi Qabsoo Ummata keenyaafis injifannoo dha.
Dhaaba keenya ABO fi Qabsoo Ummata keenyaa qofaaf osoo hin taane akkuma waliigalaatti haalli biyyattii fi naannoon keenya bara 2019 keessa dabree fi har’as keessa jiru wal xaxaa, boorawaa fi yaaddessaa tahee mul’atus kan abdii nu kutachiisuu fi ijibbaannu miti. Inumaa iyyuu caalaatti tasgabboofnee akka itti yaadnuu fi itti yaaddofnu, akka xiiqeffannee furmaata waliigalaa argamsiisuuf hojjennu, akkasumas, wal hubannoon, waliif obsuu fi mirga walii kabajuun kanneen dhimmi ilaalu hunda gidduutti akka uumamuuf gahee keenya ciminaan akka bahannu kan nu gaafatu dha.
Haalli siyaasaa fi nageenyaa mul’atu gaaffii fi yaaddoo hedduu kan namatti bulchu yoo tahes, barri haarayni simanne (2020) ammoo akka Heera biyya kanaatti Filannoon biyyoolessaa kan keessatti gaggeffamuuf jiraatu tahuun beekamaa dha. Didhaan jiru guddaa tahus, filannoon kun kan Ummatootni hundumtuu (ganda irraa hanga Masaraa Mootummaatti) bakka bu’oota isaanii bilisummaadhaan itti filatan akka tahuuf ABOn gahee isaa bahachuuf of qusannoo malee akka hojjetu carraa kanaan mirkaneessina. Ummatni keenyas dammaqiinsaa fi eeggannoo guddaadhaan carraa kanatti dhimma bahuuf qophii gama ofii gochuu akka qabu gadi jabeessinee dhaamna. Hojiin jaarmayaa Addi Bilisummaa dhimma kana milkeessuuf Dhaabota Siyaasaa Oromoo fi kanneen biroo waliin hojjechaa jiru bu’aa barbaadamu akka argamsiisuufis hundumtuu akka tumsuu fi gahee isaa bahatu gaafanna.
Maayyii irratti bulchiinsi ‘Command Post’ kan bara dabre guutuu fi har’as Godinoota Oromiyaa hedduu keessatti jireenya Ummata keenyaa mancaasaa turee fi jiru Ummata keenya irraa kaafamee rakkoon jiru hundumtuu wal marii qaamota dhimmi ilaalu hundaatiin karaa nagaa akka furmaata waaraa argatuuf mootummaa dabalatee kanneen dhimmi ilaalu hundi gahee isaanii akka bahatan gaafachaa barri haarayni 2020 kan Bilisummaa, Nagayaa, Gammachuu fi Badhaadhinaa akka hundumaaf tahu hawwii keenya ibsina.
Amajjii 01, 2020
← Prisons that Held Gemechu Ayana Can’t Crush Self-Determination’s Spirit Sirna Kabajaa Amajjii 1, 2020: Waajjra ABO Finfinnee Gullalleetti. →